U fiirso booqdayaasha booqdaya, hubi, ku iibso waqtiga dhabta ah! | Martech Zone
Falanqeyntu had iyo jeer kuma siineyso tirooyinka qotada dheer iyo safafka habdhaqanka ee aad ugu baahan tahay inaad ku horumariso khibradda wax iibsiga ee khadka tooska ah. Lexity wuxuu leeyahay hal app, Lexity Live, taas oo kuu oggolaaneysa inaad u kuurgasho macaamiisha daalacanaya, iska hubi oo wax ku iibso waqtiga dhabta ah. Lexity Live waa barnaamij bilaash ah oo taageera gebi ahaanba badeecadaha waaweyn ee ecommerce suuqa.
Halkan waxaa ah burburka Lexity Live ka socota boggooda (hubi inaad aragto Demo Live):
La soco dhaqdhaqaaqa macaamiishaada waqtiga dhabta ah - Lexity Live waa aalad falanqeyn taraafikada barta internetka oo bilaash ah oo loogu talagalay ecommerce, oo lala socdo dabagal waqtiga-dhabta ah. Qalabyada kale sida Google Analytics waxay qaadan karaan saacado si ay uga shaqeeyaan xogta, goor dambe inaad falceliso. Lexity Live, macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee ku saabsan booqdayaasha bogga ee hadda socda waxay kuu oggolaaneysaa inaad daawato macaamiishaada oo booqda boggaaga iyo bogagga qaybta, wax ka baro wax soo saarkaaga boggaga wax soo saarka, oo aad ka tagto iibsiga si aad u iibsato, dhammaantood markay dhacaan.
Lasoco taraafikada dukaankaaga - Eeg sida taraafikadaadu u hagaageyso waqtiga iyo goorta saacadahaaga ugu sarreeya ee ganacsiga yihiin, adigoo raadinaya halka ay macaamiishaadu ka imaanayaan iyo waxa ay raadinayaan. Arag warbixinnada booqdayaasha gaarka ah, aragtida bogga, isbeddellada ereyga, boggaga tixraaca ugu sarreeya, makiinadaha raadinta, iyo juquraafiga.
Eeg meesha macaamiishaadu waqtigooda ku qaataan - Boggee ayay macaamiishaadu fiiriyaan iyo muddo intee le'eg? Xagee bay ka degayaan? Ku ogow adoo raacaya macaamil kasta oo aad ku aragtid dhaqankooda waqtiga dhabta ah dukaankaaga ganacsiga. Jidka faahfaahsan iyo warbixinnada falanqaynta bogga ee booqdayaasha gaarka ah waxaa ka mid ah waqtiga goobta, illaa kan labaad.
Lexity waxay leedahay xoogaa barnaamijyo kale oo lacag la bixiyo inaad ku dari karto sidoo kale, oo ay kujiraan: quudinta dukaamaysiga, isdhaxgalka dukaamaysiga Google, Wadahadalka Degdega ah, warbixinta Pinterest, iyo Dib u iibinta. Saxiix Lexity Live bilaash, in kastoo!
Tags: dabacsanaanlexity livemagentofalanqaynta waqtiga dhabta ahwaqtiga dhabta ahwaqtiga dhabta ahdukaankastats
Agoosto 27, 2012 saacaddu markay ahayd 2:42 PM
Waad ku mahadsantahay boostada, Douglas! Waan ka helnay akhrinteeda. Noo soo sheeg haddii adiga, ama mid ka mid ah akhristayaashaada, aad wax su'aalo ah ka qabtid Lexity!
Agoosto 27, 2012 saacaddu markay ahayd 3:59 PM
Horeyba ogeysiis ugu dir macmiil, @ twitter-14135545: disqus si aad uqorto oo aad u bilowdo tijaabinta.